[Review] Top 5 mặt nạ trị mụn ẩn và thâm hiệu quả tốt nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 5 mặt nạ trị mụn ẩn và thâm hiệu quả tốt nhất | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 mặt nạ trị mụn ẩn và thâm hiệu quả tốt nhất | Muasalebang in Muasalebang
Induna efihlwe ngaphansi kwesikhumba ibhekwa njengohlobo olunenkani lwenduna, oluvame ukubuya futhi lungabangela ama-pustules, induna evuvukalayo okunzima ukuyiphatha ngokuqinisekile. Ukusetshenziswa kwe i-acne mask Kuyisinyathelo sokunakekelwa kwesikhumba esiza ukulwa nokuvuvukala, ukulawula uwoyela, nokwenza isikhumba singabi mahhadlahhadla futhi sibe bushelelezi. Ake sithole Amamaski ama-acne aphezulu ayi-5 asebenza kakhulu namuhla.
1 Indlela yokukhetha imaski engcono kakhulu yokwelapha induna efihliwe
1.1 1.1 Ukukhetha imaski elungile yesikhumba sakho
1.2 1.2 Izithako kumaski
1.3 1.3 Khetha imaski yokwelapha izinduna ezifihliwe ngomkhiqizo
2 Amamaski ama-acne aphezulu aziwa kakhulu ayi-5 ngo-2021
2.1 2.1 Imaski yokulawula uwoyela, ukwelapha izinduna ezifihliwe namabala amnyama Isihlahla Setiye iNaruko
2.2 2.2 Abanye Nge-Mi Tea Tree Calming Sheet Mask
2.3 2.3 Isihlahla Setiye & I-Licorice Pore Refining Imaski Yobuso UDkt. Morita
2.4 2.4 I-Mediheal Teatree Care Solution Ibalulekile Imaski EX
2.5 2.5 I-Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask
Indlela yokukhetha imaski engcono kakhulu yokwelapha induna efihliwe
Ukuze inqubo yokwelapha izinduna ezifihliwe iphumelele, kufanele uqale wazi Indlela yokukhetha imaski yokwelapha i-acne efihliwe? ezifanele. Abasebenzisi kufanele bacabangele ukukhetha ngokusekelwe kulezi zinto ezilandelayo:
1.1 Ukukhetha imaski elungile yesikhumba sakho
Ukukhetha imaski ye-acne efihliwe futhi emnyama, Okokuqala, kufanele uqonde isimo sesikhumba samanje. Isikhumba sakho somile, sinamafutha, isikhumba esihlangene noma esizwelayo, njll. Ukusuka lapho, uzokhetha imaski elungile, isikhumba sakho ngeke sibhekane nezinkinga eziseceleni njengokuthela amafutha amaningi, ubuhlungu obuvuthayo. , ukucasuka kwesikhumba sobuso, njll.
Ukukhetha imaski yokwelapha induna efihliwe, kufanele uqale ulalele isikhumba sakho
1.2 Izithako kumaski
Ekwelapheni izinduna ezifihliwe, imaski idinga ukuqukatha izakhi ezifana ne-HA, i-Cucurmin, njll. Lezi zici zizosiza ukusunduza izinduna, zivuselele isikhumba, futhi zinikeze isikhumba sobuso umuzwa wokuthamba, ukushelela, nokucwebezela.
1.3 Khetha imaski yokwelapha izinduna ezifihliwe ngomkhiqizo
Ukuze uthole ukwelashwa okungcono kakhulu ngaphandle kwezinkinga, umuntu kufanele akhethe uhlobo i-acne mask efihliwe kusukela kumikhiqizo yezimonyo ehlonishwayo. Ungakhethi ukuthenga imikhiqizo yomgunyathi noma esezingeni eliphansi ngenxa yenani eliphansi. Lolu hlobo lomkhiqizo alugcini nje ngokususa izinduna ezifihliwe kodwa futhi lucasula isikhumba sakho.
Amamaski ama-acne aphezulu aziwa kakhulu ayi-5 ngo-2021
Inqubo yokwelashwa kwama-acne efihliwe ngeke iphelele ngaphandle kwayo i-acne mask. Ngeposi buyekeza ama-acne masks aphezulu angu-5 Okungcono kakhulu kwanamuhla futhi okuphumelelayo kakhulu, sicela ubhekisele kukho ukuze uchaze uhlelo lokunakekelwa kwesikhumba nsuku zonke futhi uphikelele ukuze ube nesikhumba esihle kakhulu.
2.1 Imaski yokulawula uwoyela, ukwelapha izinduna ezifihliwe namabala amnyama Isihlahla Setiye iNaruko
I-Naruko wumkhiqizo wezimonyo owasungulwa e-Taiwan futhi udumile emazweni ase-Asia ngoba ifanele izici zesikhumba zabantu balapha. Ngokusho kochwepheshe, uNaruko uhlale ekhethwa ukuxazulula izinkinga zesikhumba ezifana nezinduna, amabala amnyama, ikakhulukazi izinkinga esikhumbeni esinamafutha, isikhumba esibucayi. Imikhiqizo ye-Naruko yenziwe ngokuphelele ngezithako zemvelo futhi ayiqukethe amakha okwenziwa, imibala yokwenziwa, ama-parabens, njll.
I-Naruko Tea tree Shine Control & Blemish Clear Mask (I-Naruko Tea Tree Mask) imikhiqizo ye-acne mask efihliwe yaziswa kakhulu ngabathengi. Ibhokisi ngalinye linezingcezu eziyi-8 zamamaski ezikhwameni ngazinye.
Umbala oyinhloko webhokisi lephepha nesikhwama semaski uluhlaza, uletha umuzwa omnandi futhi opholile ngokushesha nje lapho uwubona. Esinye isici esikhethekile se-Naruko Tea Tree Mask ukuthi imaski emnyama igcwele i-essence, umugqa osikiwe ugoqa ubuso ngokuqinile, usize isikhumba kuwo wonke amagumbi obuso ukuba sigcwaliswe ngokugcwele futhi sicwebezele.
Izithako eziyinhloko ze I-Naruko acne mask Leyo yi-essence ye-salicylic acid yokwelapha izinduna. Ngenxa yalesi sici, isikhumba sizokhishwa kahle, sisuse i-sebum ebangela ama-pores avaliwe, ngaleyo ndlela kunciphise ukwakheka kwezinduna. Ngaphezu kwalokho, i-essence yesihlahla setiye isiza ukulwa nokuvuvukala nokunciphisa ububomvu obubangelwa induna. I-Hamamelis Virginiana Extract, ekhishwe ku-witch hazel, ine-anti-acne nemiphumela yokulwa ne-antioxidant.
Intengo yesithenjwa: 210,000 VND/ibhokisi lezingcezu eziyi-8.
2.2 Abanye Nge-Mi Tea Tree Calming Sheet Mask
I-Korea ithathwa njengezwe lezwe lezimonyo. I-Some By Mi iwuphawu lwezimonyo oludumile e-Korea. Le nkampani yezimonyo ikhona emazweni amaningi emhlabeni jikelele kanti iVietnam nayo injalo. Imikhiqizo evela kwa-Some By Mi yonke inezithako ezilungile, zemvelo ngokuphelele. Ngokuhlanganisa i-quintessence yendalo kanye nobuchwepheshe besimanje bokukhiqiza. Abanye Nge-Mi bakholelwa ukuthi konke ukukhubazeka kwesikhumba kungathuthukiswa ngokuphelele.
Ezinye izifihla-buso zika-By Mi zinezinhlobo ezi-3 ezisekelwe ezidingweni eziyinhloko zesikhumba. Okugqame kakhulu kuseyi- Some By Mi Tea Tree Calming Sheet Mask enomuthi wetiye ukusiza ukupholisa isikhumba, ukwehlisa izinduna ezifihliwe, nezinduna ezivuvukele. Le mask yenzelwe ukwanga ubuso ngokuphelele ukuze isikhumba sikwazi ukumunca zonke izakhamzimba. Yenziwe nge-fiber cellulose engu-100%, imaski izwakala ilula, ibushelelezi, futhi ayicasuli isikhumba.
Isithako esiyinhloko se-Some By Mi Tea Tree Calming Sheet Mask isisekelo sesihlahla setiye, esisekela ukulwa nokuvuvukala, okulwa namagciwane, kanye nokuvimbela izinduna okusebenzayo. Iphunga lemvelo, abasebenzisi bazozizwa bekhululekile lapho besebenzisa imaski ngemva kosuku olude. Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwe-centella asiatica kusiza ukuqeda ubuthi esikhumbeni, futhi amaqabunga omhlonyane aphikisana nokuvuvukala, avimbela ukwakheka kwezinduna. Imaski inamandla okondla isikhumba esibushelelezi, esinwebekayo ngenxa ye-chamomile.
Intengo yesithenjwa: 33,000 VND/piece.
Inkomba: I-serum ye-acne ehamba phambili eyi-10 esebenza kahle kakhulu namuhla
2.3 Isihlahla Setiye & I-Licorice Pore Refining Imaski Yobuso UDkt. Morita
Ngesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-83 embonini yobuhle, uhlobo lwe-Dr.Morita luya ngokuya lugomela futhi lumi ngokuqinile phezulu emakethe. Imikhiqizo ye-skincare kaDkt. I-Morita iguquguquka kakhulu, iyathambisa, yenza mhlophe, inqande ukuguga, iyaqinisa, njll. Isebenzisa ubuchwepheshe bokukhiqiza obusezingeni eliphezulu, uDkt. U-Morita uhlala ecwaninga futhi athuthukise imikhiqizo efanelekile ukusiza ukuthuthukisa isikhumba samakhasimende ngamanani anengqondo kakhulu.
Imikhiqizo ye-Dr.Morita Tea Tree kanye ne-Licorice Pore Refining Facial Mask ihlaba umxhwele uma uthi nhlá okokuqala ngamaphakheji aluhlaza. Iphakheji ibonisa izilimi zesi-Japanese nesi-Taiwanese, kodwa uhlu lwezithako lubonakala ngesiNgisi, okwenza kube lula kubasebenzisi ukufunda izithako. Imaski yakhelwe ukuthi ibe mncane futhi ibe lula, igone ubuso ngokuqinile ngezinto zikasilika, okwenza imaski ibe thambile futhi ibe lula.
Izithako ezikumaski ziyinhlanganisela ye-Ivy extract, i-essence yesihlahla setiye, kanye nokukhishwa kwe-licorice ukusiza ukuthambisa, ukubuyisela isikhumba, ukuhlanza nokupholisa isikhumba, futhi kusize ukuphulukisa izibazi zezinduna. Ukufaka imaski njalo kuzosiza ukukhanyisa isikhumba ngama-anti-oxidants, ukufiphaza amabala amnyama abangelwa induna futhi kuqinise izimbotshana. Ngaphezu kwalokho, kune-Hyaluronic Acid yokusiza ukugcwala isikhumba, i-Panthenol, i-Ceramide ukusiza ulwelwesi oluvikelayo lwesikhumba lubuyisele futhi lukhuthaze imisebenzi yalo.
Intengo yesithenjwa: 27,000 VND/piece.
2.4 I-Mediheal Teatree Care Solution Ibalulekile Imaski EX
I-Mediheal wumkhiqizo wezimonyo owasungulwa futhi wathuthukiswa isikhungo semithi yobuhle saseSeoul University. I-Mediheal inikeza abesifazane imikhiqizo yokunakekelwa kobuhle njengamamaski, izinto zokuhlanza ubuso, izindebe zomlomo, okokuvikela ilanga, njll. I-Mediheal inqoba abathengi baseVietnam ngemikhiqizo yayo emihle kakhulu yemaski, inikeze Abasebenzisi ukuthi bazizwe sengathi bayayinakekela e-Spa.
Isixazululo se-Mediheal Teatree Care Solution Essential Mask EX inomumo wesikhwama sepulasitiki esinokuphrinta kweshubhu lokuhlola elihlanganisa imibala yamathoni amabili ejwayelekile yomugqa wokwelapha izinduna, oluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe. Izinto zisebenzisa i-cellulose fiber engu-100%, okwenza imaski ibe mncane futhi inamathele kakhulu, inganyakazi lapho imisipha yobuso isebenza.
Eshidini lemaski i-Mediheal Teatree Care Solution Essential Mask EX iqukethe i-Glycerin ukuze inikeze umswakama esikhumbeni, iqinisekise isikhumba esicwebezelayo. I-Propanediol isiza ukuthobisa isikhumba, ivimbele ukulahlekelwa kwamanzi esikhumbeni. I-1,2-Hexanediol isekela i-antibacterial, ithawula ukuvimbela ukucasuka kwesikhumba.
Ngaphezu kwalokho, i-salicylic acid ekhishwe ku-willow isiza ukukhipha amangqamuzana afile, ama-pores ahlanzekile ajulile, ugweme ukuvala ama-pores, ukuvimbela ukwakheka kwezinduna. Akunakwenzeka ukungasho ukuthi i-centella asiatica extract, i-lettuce extract iletha imiphumela ephikisana nokuvuvukala, ithoba amanxeba e-acne. Ukukhishwa kukabhontshisi kabhontshisi (i-Glycine Soja Seed Extract) kusiza ukwenza isikhumba sibe mhlophe, sinciphise amabala amnyama.
Intengo yesithenjwa: 28,000 VND/piece.
Funda kabanzi: I-10+ Genuine Best Best Acne Creams Manje ngo-2021
2.5 I-Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask
I-Innisfree iwuphawu lwezimonyo oludumile ezweni elihamba phambili lokunakekelwa kobuhle – Korea. Ngesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-20, kuze kube manje, i-Innisfree isiwuphawu lwezimonyo oluhamba phambili futhi yathuthukiswa iningi lamazwe.
Imikhiqizo yayo inezithako zemvelo, ezithathwe kakhulu e-Jeju Island njengokhula lwasolwandle, umlotha wentaba-mlilo, itiye elihlaza, njll. I-Innisfree yaziwa abathengi baseVietnam ngemikhiqizo yokulwa nezinduna, ikakhulukazi imaski yomhlaba. I-Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask
Ngokomklamo wenkampani, imikhiqizo evela kuma-orchid inombala onsomi, ovela etiyeni eliluhlaza namaqabunga etiye aluhlaza, kanti emlotheni wentaba-mlilo inombala onsundu omnyama. Ngakho-ke, ukupakishwa komkhiqizo kunombala onsundu kanokusho oyithusi. Isivalo simbozwe ngensimbi emnyama, ibhokisi lephepha lisebenzisa iphepha eligaywe kabusha, elihambisana nemvelo.
Vele, isithako esiyinhloko sale maski ubumba oluxutshwe nomlotha wentaba-mlilo eJeju Island, olunamandla okwelapha amakhanda amnyama nezinduna ezifihliwe kahle kakhulu. Kukhona futhi okukhishwe ezitshalweni ezi-4 ezidumile e-Jeju Island ezinekhono lokukhipha, ukuhlanza izimbotshana, ukunciphisa i-sebum esikhumbeni njengama-barnacle, i-cactus, ama-tangerines, itiye eliluhlaza. I-Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask ayilungile neze. Ayinawo ama-colorants, amafutha emifino, ama-parabens, amafutha amaminerali, namakha.
Intengo yesithenjwa: 340,000 VND / jar.
Phakathi kwamakhulu emikhiqizo Imaski yezinduna ezifihliwe namabala amnyama osayizi abahlukene, abathengi bazodideka lapho bekhetha. Buyekeza Amamaski ama-acne aphezulu angu-5 aphezulu Okuhle okusebenzayo kakhulu namuhla kuzoba isiphakamiso sakho.
Mhlawumbe unentshisekelo: [Reivew] Top 5 best blackhead mask namuhla
Xem Thêm [Review] Top 6 nước xịt phòng mùi thơm dịu nhẹ an toàn nhất | Muasalebang